समाचार प्रभाव – प्रध्यानाध्यापकले गरे राजिनामा ! – Himal FM 90.2 MHz
समाचार प्रभाव – प्रध्यानाध्यापकले गरे राजिनामा !
स्थानीय समाचार adminhimal December 21, 2019
सोलुखुम्बुको सोताङ एक प्रध्यानाध्यापकले शिक्षण पेशाबाट राजिनामा दिएका छन् । नेकपाको गाउँ कमिटी अध्यक्ष र नार्केल आधारभूत विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक भएर दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेर शिक्षा ऐन विपरित काम गर्दै आएको विषयमा हिमाल एफ एमले समाचार प्रसारण तथा प्रकाशन गरेपछि पुस ३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समित र शिक्षक अभिभावक संघको बैठकमा प्रध्यानाध्यापक प्रकाश कार्कीले शिक्षण पेशाबाट राजिनामा दिएका हुन् ।
कार्की ७ महिना देखि पार्टी र प्रध्यानाध्यापकको दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए । ५ बर्ष देखि प्रध्यानाध्यापक रहेका उनले शिक्षण र राजनितिमध्ये राजनिति रोजेका छन् । स्थानीय राजनितिमा दख्खल राख्ने कार्की संघीय संरचना अनुसारको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तत्कालिन एमालेबाट उम्मेद्धार बन्ने चर्चा चलेको थियो । शिक्षण पेशाबाट राजिनामा दिएपछि खुला रुपमा राजनितिमा होमिने बाटो खुलेको छ ।